Wasiirka Maaliyadda oo shir’ aaladda ZOOM-KA laqaatay Hay;ado Caalami ah’ | Allbalcad Online
Home WARARKA Wasiirka Maaliyadda oo shir’ aaladda ZOOM-KA laqaatay Hay;ado Caalami ah’
Wasiirka Maaliyadda oo shir’ aaladda ZOOM-KA laqaatay Hay;ado Caalami ah’
Wasiirka Maaliyadda ee Xukuumadda Federaalka Soomaaliya mudane Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaa maanta aaladda fogaan arragga uga qeyb galay Shirka Sanad laha ah ee IMF iyo World Bank oo ay ka soo qeyb galeen dhammaan Wasiirada Maaliyadda ee Dalalka Carabta, kaasi oo socon doona muddo Todobaad ah.
Wasiirka Maaliyadda ayaa si gaar ah shir ula yeeshay Madaxweyne Ku-xigeenka Bangiga Adduunka ee Qaaradda Afrika Hafez Ghanem iyo Agaasimaha IMF Kristalina Georgieva oo ay ka wada hadleen arrimo muhiim.
Wasiir Beyle ayaa yiri “Shirkeena waxa aan diiradda ku saarnay arimaha dib-u-habeynta dhaqaalaha, dhameystirka hanaanka deyn Cafinta iyo saameynta COVID-19.
Dadaalladii mira dhalay ee Wasaaradda Maaliyadda iyo dib-u-habeynta dhaqaalaha ee ay Wasaaraddu ku tallaabsatay waxa ay fureen Albaabada caalamka iyo garab istaagga Soomaaliya.
Previous articleMadaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump oo dacwad laga gudbiyay
Next articleTaliska Ciidanka booliska oo soo bandhigay walxaha qarxa & Ragii diyaarinaayay qaraxyada